I-Triptorelin Acetate In sindion / Powder: Ndingayifumana phi? - Phcoker
I-Triptorelin Acetate In sindion / Powder: Ndingayifumana phi?
1. I-Triptorelin Acetate
2. Yintoni i-Triptorelin Acetate esetyenziselwa?
3. Isebenza kanjani iTarttorelin Acetate kuwe?
4. Ndifanele ndiyisebenzise njani iTarttorelin Acetate?
5. Yintoni ekufuneka uyazi ngaphambi kokuyisebenzisa?
6. Umthamo weTarttorelin Acetate
7. Iziphumo ezichaphazeleka zisebenzisa i-Triptorelin Acetate
8. Ngaba i-Triptorelin Acetate ilungile kum?
9. Ndingayifumana phi i-Triptorelin Acetate?
I-Triptorelin Acetate ikwabizwa ngokuba yi-Triptorelin Acetate140194-24-7 sisimo semvelo semichiza enezinto ezininzi ezisekondari kunye nezindawo eziphakamileyo kwi-atom yekhabhoni ephakathi, Ngamagama alula, oku kuthetha ukuba zininzi ii-atom zentsimbi, amaqela asebenzayo adityaniswe kwikhabhoni. atom kwisakhiwo seekhemikhali. Ngokusisiseko ngegama elithi 'Organic', into ethethwa kukuba le molekyuli ine-atom yekhabhoni njenge-atom ephambili. Yonke imo ye-organic enobukho be-atom yecarbon kwaye yiyo loo nto ikhabhoni sisitshixo sobomi.
I-Triptorelin Acetate isetyenziswa ngokubanzi njengechiza kunye nokwenziwa kwamachiza elebhu. Ukusetyenziswa kwesiyobisi kubaluleke kakhulu kuba kukhetheke kakhulu. I-Triptorelin Acetate ngobunono yiasidi kwaye inomlinganiselo omncinci wokubonelela nge-hydrogen xa kuthelekiswa nenqanaba lokwamkela i-hydrogen. Inefomula yemichiza ye-C66H86NXXUMXO18 kunye nomndilili we-athom ye-molar ye-15 gram nganye. Abarhwebi okanye abathengisi beziyobisi banokusebenzisa la magama njenge-decapeptyl, i-gonapeptyl, njl, okuthetha ukuthi yi-Triptorelin Acetate. I ukusetyenziswa kweTarttorelin Acetate Kwilizwe lanamhlanje elivelileyo, Eli chiza lisetyenziswa ukunyanga umhlaza wesifo somhlaza (Ukubhekisa kumadlala endocrine kwinkqubo yokuzala yomntu kwindoda). Ayisiyo kuphela umhlaza kodwa esetyenziswe kwizigaba eziphambili zokulawulwa kwehomoni, ulawulo lwe-testosterone njl.yaziwa ukusetyenziswa kweTarttorelin Acetate okanye i-Triptorelin Injection, inokuba luncedo kakhulu kwihlabathi lanamhlanje. Umenzi we-Triptorelin Acetate ukwacebisa ukuba uthathe uluvo lwakho koogqirha ngaphambi kokuthatha amayeza.
I-Triptorelin Acetate140194-24-7 ihlala yaziwa njenge-Triptorelin inaliti yeTrelstar. Inaliti ye-Triptorelin iluncedo kakhulu ekunyangeni umhlaza wesifo sephepha. Inaliti ye-Triptorelin ikwasetyenziselwa ukulawula iihomoni ebantwaneni; Ityala lokusebenzisa kukuba xa umntwana ekhuthele kakhulu ekukhuleni kwakhe kwaye iihormoni zakhe zikhutshwa kwangoko ngaphambi kokuba zikhokelele kwinqanaba lokufikisa, inaliti yeTarttorelin isetyenziselwa ukwehlisa ukugcinwa kwehomoni. Eli liyeza liza kuphantsi kohlelo I-Gonadotropin ikhulula iihomoni isifinyeziwe njenge-GnRH. Kuluncedo kakhulu ukulawula abantwana ngokukhawuleza kunokukhula okuqhelekileyo ngokwesini. Ngamagama alula, inaliti yeTarttorelin isetyenziselwa ukunciphisa ukhuselo olugqithisileyo lokubuyiswa kovavanyo. I-testosterone yi-hormone enoxanduva lwabalinganiswa abesilisa ngokwesondo. Zininzi ezinye izinto ezisetyenziswayo anokuthi ucebise ngazo ugqirha wakho ngokubhekisele kugonyo lwakho. Umntu kufuneka anyamekele umthamo njengoko ichiza lisenokungasebenzi ngokufanayo kuye wonke umntu, iziphumo ebezingalindelekanga kufuneka zibukelwe ngokukuko ingakumbi xa uqala ukusebenzisa ichiza.
I-Triptorelin Acetate ikwasetyenziswa ukunyanga umhlaza webele kubantu basetyhini. Inye into ekufuneka iqatshelwe ukuba inaliti yeTarttorelin Acetate ayizukuzisusa zodwa iiseli zomhlaza, Iyawunciphisa ukukhula kwehomoni ukuze iiseli zomhlaza ziyeke ukusasazeka ngaphakathi komntu, Olu lunyango kuphela olunokuthi ngamanye amaxesha lube neziphumo ezicothayo. Ungakulibali ukuhlolwa rhoqo komzimba wakho kwisithuba usebenzisa iyeza kwaye naluphi na uhlobo lokuxhamla kufuneka uxelwe kugqirha wakho ngaphambi kokuba uqinise kwaye uqalise ukubonisa iziphumo ezibi.
Inaliti iqala isenzo sayo ngokuthi iqale ukusebenza ngemithambo kwaye yenza ukuba iihormoni ezikhulise ukukhula njenge-testosterone njl njl. Isenzo sayo se-Microbiological kwi-hormones kunye namalungu ekhupha i-hormone isenokungabi yingozi kakhulu kodwa oko kuxhomekeke kumthamo wechiza kunye nokugonywa. womntu. Ngokubanzi, ithamo enye ayibonisi isiphumo kodwa umthamo othile omiselwe ngugqirha wakho uya kunceda kummiselo wokukhula.
3. Ingaba kwenzeka njani I-Triptorelin Acetate work kuwe?
The Inaliti yeTarttorelin (Trelstar), ichiza lisebenza kumadlala endocrine kwaye lisusa iiseli zomhlaza. Xa kuziwa kumhlaza ophambili we-Prostate, oko kuthetha ukuba umhlaza usasazeke kwamanye amalungu aphuma kwizitho zeprostate. Iiseli zomhlaza we-Prostate zihamba ngokwenkqubo yakho ye-lymphatic ukuya kwi-rectum yakho, amathambo kunye ne-bladder nakwiimeko ezithile. I-Triptorelin Acetate apha inceda ekususeni ngokusisigxina zonke iiseli zomhlaza, i-Triptorelin Acetate iyanceda kumhlaza kodwa ke lixhomekeke kweliphi ixesha ekuzimiseleni nasekugomeni kwakho.
Ukuba ugqirha wakho uqalile ukujonga ukunciphisa kwehomoni yakho, oko ke makube ngumsebenzi we-Triptorelin Acetate.
Ukuba ugqirha wakho uqalile ukujonga ukwanda kweeseli zakho zomhlaza ukuba umisiwe, emva koko kuyakuba ngumsebenzi weTarttorelin Acetate
Ukuba uqala ukujonga utshintsho kwindlela obukeka ngayo, ke loo nto ingumsebenzi we-Triptorelin Acetate
Ngamagama alula i-Triptorelin Acetate lelinye leziyobisi njengalo naliphi na elinye iyeza elikhoyo kwintengiso, isebenza ngokujongana neendawo ezichaphazelekileyo emzimbeni wakho kwaye uchuma ukuya kunyango. Kuya kufuneka uyazi kakhulu ithamo kwakhona kunye nexesha eliphakathi kwawo onke amayeza alandelelanayo.
Kukho uphononongo oluninzi lweTarttorelin Acetate kwi-intanethi enokuthi ichaze ngobunzulu. Umvelisi we-Triptorelin Acetate uprinta ngokufutshane ukusebenza kwiphepha lemveliso.
I-Triptorelin Acetate (140194-24-7) isetyenziswa kunyango lomhlaza (umhlaza webele) kunye nommiselo wokukhula kwamahomoni. Amayeza e-Triptorelin Acetate anikwa ngugqirha wakho njengendlela yenaliti, ngesiqhelo, inaliti iya kuba kanye kwiiveki ze-4-(oku kuyakwazi ukwahluka ngokweemeko zakho zempilo kunye nokungathathaleki komzimba). Kuya kufuneka ulumke kumthamo ukuthintela naziphi na iziphumo ebezingalindelekanga. Ngokoncedo lwakho, ndicebisa ukuba ndichaze usuku lwakho kwikhalenda kwaye ngamanye amaxesha uthathe inaliti yeTarttorelin Acetate ngenani elifanelekileyo lomthamo weziphumo ezilungileyo. Ukuchacha kwe-Urinary yeyona mpawu ixhaphakileyo ngelixa usebenzisa eli chiza. Kule meko, kuya kufuneka udibane nodokotela wakho kwaye kufuneka usebenze kunye ngale nto kulungelelwaniso lwakho. Ngapha koko, oku kuya kubakho kuphela kwiiveki ezimbalwa zokuqala. Ukuxineka rhoqo, ukuqaqanjelwa kwethambo kunokuba zimpawu ezimbalwa kusetyenziso lwamachiza kodwa kufuneka uxelele ugqirha wakho ukuba bayaqhubeka besanda kwintlungu. nangona zingekho iziphumo ezibi eziyingozi, Akukho nto iphosakeleyo ukuba kwicala elikhuselekileyo ngelixa uzama amayeza amatsha. Musa ukothuka kakhulu, iyeza lisebenza kuwe kwaye uya kuhlala uxhaswa ngugqirha. Ngalo naliphi na ixesha ngeli xesha lokufumana amayeza, zive ukhululekile ukuqhagamshelana nodokotela wakho malunga nayiphi na imiba yonyango. Ukusetyenziswa kuya kuchazwa yingcali yakho kwaye ndikucebisa ngesisa ukuba ungaphazamisi nakuphi na umthamo okanye ixesha lonyango.
Ubuninzi beTarttorelin Acetate isetyenziswa ngabantu abanengxaki yomhlaza webele okanye imiba yokukhula kwangoko. Kuya kufuneka bazi ukuba isifo sinokunyangeka ngexesha befika kunyango. Amaxesha ngamaxesha kufuneka abonane nogqirha / ugqirha wakhe buqu malunga nokuchaphazeleka okanye iimpawu, ngamanye amaxesha ezona ziphumo zinganikezelwanga zingakhula zibe yingxaki enkulu. Ezi zinto kufuneka zithathelwe ingqalelo ngaphambi kokuba usebenzise naliphi na ichiza njengeyeza. Isigulana kufuneka kwakhona sikhumbule ukuba inaliti yeTarttorelin Acetate ayisayi kuwususa ngokupheleleyo umhlaza ngaxeshanye, Imisa nje iihormoni nto leyo eye iyekise ukukhula kweeseli zomhlaza. Eli nyango aluphelisi umhlaza emzimbeni wakho; Iphilisa ngokuthe ngcembe kwaye ngokuthe chu ngokungavumeli ukuba ikhule. Kuya kufuneka ukhangele Uphononongo lweTarttorelin Acetate. Nokuba kukho okhethiweyo, akukho nto iphosakeleyo ekukhangeleni uhlolo lweTarttorelin Acetate kwi-intanethi.
Umthamo weTarttorelin Acetate wahlukile kubungakanani bento kunye nakwimpilo yesigulana. Umthamo weTarttorelin Acetate nawo uxhomekeke ekungagcinini kwesigulana.
Idosi yeNyanga ye1
Inaliti ye-Triptorelin okanye I-Trelstar sisiyobisi esisebenza kakuhle ukuba ngaba umthamo wamayeza umiselwe ngokuchanekileyo.
Kwinyanga enye yokukhupha amayeza akhupha kancinci, iTrelstar iyacetyiswa ukuba ikhutshwe kwi-3.75mg nge-2ml amanzi angenasici njengesixhobo sokujova. Oku kuya kuqhubeka inyanga. Oku kufuneka kube yinaliti ye-intramuscular. I-3.75mg i-Triptorelin Acetate + ye-2ml yamanzi iya kusebenza njengesiseko se-peptide. Le dosi iqala ngegazi kwimithambo yeethishu zemisipha kunye nokunciphisa inani lehomoni kwiziphumo.
Le dosi kufuneka yenziwe usebenzisa inaliti ye-21 yeenaliti okanye inkqubo yokuhambisa idosi enye.
Idosi yeNyanga ye3
Kwinyanga ezintathu ekhutshwa kancinci amayeza, i-Trelstar iyacetyiswa ukuba ikhutshwe kwi-11.25mg nge-2ml yamanzi angenasininzi njengesixhobo. Oku kuya kuqhubeka rhoqo kwiinyanga ezintathu. Oku kufuneka kube yinaliti ye-intramuscular. I-11.25mg i-Triptorelin Acetate + ye-2ml yamanzi iya kusebenza njengesiseko se-peptide. Le dosi iqala ngegazi kwimithambo yeethishu zemisipha kunye nokunciphisa inani lehomoni kwiziphumo. Le dosi kufuneka yenziwe usebenzisa inaliti ye-21 yeenaliti okanye inkqubo yokuhambisa idosi enye.
Idosi yeNyanga ye6
Kwinyanga emithandathu yokukhupha iyeza, I-Trelstar iyacetyiswa ukuba ikhutshwe kwi-22.5mg nge-2ml yamanzi angenasininzi njengakwisitofu. Oku kuya kuqhubeka rhoqo kwiinyanga ezintandathu. Oku kufuneka kube yinaliti ye-intramuscular. I-22.5mg i-Triptorelin Acetate + ye-2ml yamanzi iya kusebenza njengesiseko se-peptide. Le dosi iqala ngegazi kwimithambo yeethishu zemisipha kunye nokunciphisa inani lehomoni kwiziphumo. Le dosi kufuneka yenziwe usebenzisa inaliti ye-21 yeenaliti okanye inkqubo yokuhambisa idosi enye. Umthamo weTarttorelin Acetate ungahluka ngolu hlobo kwaye kubangcono uthathe neengcebiso kogqirha.
Ungasebenzisa i-Triptorelin Acetate kulo naliphi na ixesha lokuthothisa. Kodwa kuya kufuneka ulisebenzise emva kothethwano nogqirha ogunyazisiweyo kwaye kuphela emva kokuba ekuyalele leyeza.
Xa uqala ukusebenzisa ichiza i-Triptorelin Acetate, ngakumbi xa uqala ukusebenzisa eli liyeza oku kungonyusa okwethutyana iihormoni ezithile, le yimibandela efanayo neemeko ekunyangwa ngazo. Nangona kunjalo, oku akufuneki kube yingxaki kodwa kukho ezinye iziphumo ebezingalindelekanga ekufuneka zisonjululwe ngokulula. Ukuvaleka komchamo, ukuchama kabuhlungu kunye nokuchama kwigazi uchama ezinye zeziphumo ebezingalindelekanga njengoko iTrelstar isebenza ngommandla weProstate. Oku kukwenzeka ngenxa yokugqithisa kakhulu kwaye kuya kuba yinto yethutyana njengoko umzimba wakho usakha amajoni omzimba wakho kwichiza elisandula ukwenziwa. Umakhi weTarttorelin Acetate ayinanto yakwenza nemiphumela yakho.
Nangona kunjalo, eli liyeza akufuneki limiselwe abafazi abakhulelweyo njengoko kunokuba nefuthe elibi kumntwana.
I-Triptorelin Acetate iphumela ekuncipheni okukhulu kwamahomoni, kwaye neTriptorelin Acetate isiphumo sokwehla kwesifo sakho somhlaza. Unokujongana nayo nayiphi na kwezi ziphumo zecala zeTarttorelin Acetate.
Kungcono ukunxibelelana nodokotela wakho ngokukhawuleza ukuba ufumanisa naziphi na iziphumo ebezingalindelekanga zeTarttorelin Acetate:
Ukutswina okuqhubekayo kubangela ukubanda, umqala owomileyo obangela ukukhwehlela
Ukuqaqanjelwa sisisu kukuziva kukuhlanza rhoqo
Urhudo kunye neengxaki zokugaya.
Intlungu okanye naluphi na uhlobo lokudumba okwenziwe kwindawo eyonzakeleyo
Ukunyuka kweqondo lentliziyo ngeBP ephezulu kunye namanqanaba eswekile
Ayikwazi ukusebenza, izihlunu zemisipha kunye nobungqindilili
Intlungu yangemva kunye nokwenza buthathaka kwezihlunu
Ukwehla kwamandla emizimba
Iilwimi azikwazi ukuva incasa
Ukuvumba kwesiqatha emphefumlweni
Ukuvutha okutsha kunye nokunyuka kobushushu bomzimba
Intloko kunye nesiyezi
Ezi ziphumo zecala zeTarttorelin Acetate uninzi lweziphumo ebezingalindelekanga kodwa ayilo luhlu lupheleleyo. Ezinye zinokwenzeka ngokuxhomekeka nakweyiphi na enye imeko. Uyacetyiswa ukuba uhlale uphaphile kwaye uxelele ugqirha wakho ngalo naluphi na olunye uncedo.
Ngelixa uthatha eli liyeza, ichiza liqala ngokuphuma emzimbeni njengokuhamba kwegazi, umchamo, njl.nokuthi kuqatshelwe ukuba isigulana esigqibileyo kulo mayeza akufuneki sichukumise naluphi na kwezi zinto zincinci kwiiyure ze-48. Iigloves zerubber (zabanonopheli) ziyimfuneko ngelixa usebenzisa iyeza.
Kuya kufuneka uxelele ugqirha wakho malunga nawo onke amayeza akho ngoku, ngenxa yokuba i-Triptorelin Acetate inokusabela namanye amachiza anokungalungelanga unyango.
I-Triptorelin Acetate ilungile kuwe ukuba unokuthi uhlupheke nemiba yehomoni. I-Triptorelin Acetate inokusetyenziswa nangubani na onengxaki ngaphandle kwabafazi abakhulelweyo. Ngaphezu koko, kuya kufuneka uthathe ugqirha wakho uluvo lokuthatha amayeza njengoko enokuziva malunga nomzimba wakho kakuhle. Nawuphi na umcimbi onxulumene nonyango kufuneka uxutywe nodokotela wakho kuqala kwaye ungazithelekisi nolunye olunye ngokuya kumayeza afanayo, nobabini ninokuba neendlela ezahlukeneyo zokuzikhusela kunye nemikhwa yokutya, wonke umntu akafani. I-Triptorelin Acetate ineziphumo zonyango, kwaye ukuba yiyo oyifunayo ke ilungile kuwe. I-Triptorelin Acetate powder okanye i-Trelstar, Nokuba oku kunokuba yinto edidayo. I-Triptorelin Acetate powder ngexabiso eliphantsi kunaliti. Kodwa inaliti ibonise iziphumo ezingcono ngokuthelekiswa neTarttorelin Acetate powder.
Ungathenga i-Triptorelin Acetate kwiivenkile zeziyobisi eziqinisekisiweyo kwimigqaliselo. Ungandwendwela naliphi na isebe le Phcoker ukufumana i-Triptorelin Acetate yakho ngexabiso elinokufikeleleka. Soloko ujonga uphawu kunye nomhla wokuphelelwa ngaphambi kokuba uthenge iTarttorelin Acetate.